Maro adag drywall Joint mesh Tape - Shiinaha QuanJiang qalabka New
Maro adag drywall cajalad mesh wadajir ah waxaa leh tolmo wanaagsan by C-galaas dun Maro adag, iyo dahaarka leh kula daahan adkaysi alkali iyo xabagta is-koolo. Waa cajalad mesh Maro adag loogu talagalay isticmaalka leh xarunta si wadajir ah ay u xoojiyaan goysyada guddiga gypsum, dayactirka drywall, iwm
QUANJIANG waa mid ka mid ah soo saarayaasha sare iyo iibiyeyaasha mid ka mid ah dunida magac caan Maro adag drywall cajalad mesh wadajirka ah ee Shiinaha, soo dhaweyn si ay u iibsadaan ama jumlada kartoo Maro adag is koolo mesh cajalad sameeyey Shiinaha iyo muunad lacag la'aan ah ka our warshad hesho.
Qalabka: C-galaas dun Maro
Daahan: daahan adkaysi alkali iyo xabagta is-koolo.
Miisaanka: 60g / m2, 65g / m2, 70g / m2, 75g / m2, iwm
Width: 5cm, 10cm, 15CM, 2inch, 3inch, 4inch iwm
Length: 20, 45, 90, 153M, 150ft, 300ft iwm
caabin alkali u fiican, xoog siligga sare, dabeecad wanaagsan oo leh xabag
duudduuban kasta oo ku yaal bac caag ama idiinkala hadhin kaamerada la qoraalka, 2 inch ama tube warqada 3 inch.
Waxaan u isticmaali tayo sare leh alkali daahan adkaysi iyo xabagta koolo, waxaa aad u muhiim ah
mesh PRESTN lagu go'an laga yaabaa in aad u xoog badan, iyo waxa Maro adag u ma fududa in ay u guuraan ama soo dhacaan
Maro adag B.The drywall cajalad si wadajir ah waxay leedahay dabeecad wanaagsan oo leh xabag iyo waqti dheer waxaa la diidi karaa, waqti isku mid ah cajalad ah waa u fududahay in ay aayar, waa maxaa yeelay, xabagta koolo waa gaar ah oo kaamil ah.
Isticmaalka la xarunta si wadajir ah ay u xoojiyaan goysyada guddiga gypsum, drywall dayactirka, iwm
walax-baadhitaano yaryar, free
Next: Is-koolo Maro adag mesh Tape
Maro adag drywall Tape
Fabric Repair Wall
Repair Wall Maro adag Fabric
Repair Wall Maro adag Patch
dayactirka Wall Patch
Wall Repaire Birta Patch